Baidoa Media Center » Raisalwasaarihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo ka hadlay hadalkii kooxda Monitoring group.
Raisalwasaarihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo ka hadlay hadalkii kooxda Monitoring group.
July 17, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Raisalwasaarihii hore ee xukuumada KMG Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul uga jawaabay hadalkii dhawaan kasoo yeeray kooxda Monitoring group ee ahaa in madaxda sare ee dowlada KMG Soomaaliya isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
“Waa waxba kama jiraan xukuumad musuq maasuq la dagaasha, oo howl karnimo daacadnimo muujisay ayaa aheyn, warbixinta aniga ima eedeyn wax eedeyn ima soo wacan arrinta aad ka dhawaajisay kuli waa wada waceen eedaha gashay, marka taas waxay muujineysao qof banaanka ka ah wixii musuq maasuq inaan ahay”ayuu yiri Farmaajo oo wareysi siiyay mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho.
Isaga oo ka jawaabay hadalka kasoo yeeray raisalwasaaraha XKMG Soomaaliya mudane Gaas ayuu yiri mudane Farmaajo.
“Ra’iisul Wasaaraha wuxuu ka tirsanaa Xukuumadeyda, wuxuu ahaa nin aan saaxibo aheyn oo aan aniga magacaabay, wixii ceeb iyo wanaag qeyb ayuu ku lahaa, wax isaga ka baxsan ma jiri doonto”ayuu yiri Farmaajo.
Dhawaan ayay kooxda Monitoring gyoup soo daabacday warbixin ay ku sheegtay inay masuuliyiinta sare ee dowlada KMG Soomaaliya ay lunsadeen lacago fara badan.
One Response to Raisalwasaarihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo ka hadlay hadalkii kooxda Monitoring group.
Aden Ibraahim says:	18/07/2012 at 22:39	Somalia Xalkeeda kuma jiro in Saxiixeyaal dalka iyo dadkaba loo afduubo, taasana keentey iney u qaataan iney ka sarreeyaan Sharciga, kuna baneysteen iney ku kacaan fal kasta oo ay u arkaan iney ugu gaari karaan danahooda.